Masjidka Alhouda ee magaallada Flen oo dhaawacyo loo gaysto | Somaliska
Masjidka Alhouda ee ku yaala magaallada Flen ee waddanka Sweden ayaa waxaa lagu hayaa dhibaatooyin badan oo jijibin daaqadaha iyo albaabadaha iyo boorka masjidka. Ma´aha markii 1aad ama 2aad ee dhibaatooyin loo gaysto Masjidka ee xataa waxaa lagu sawiray calaamado muujinaya cunsurnimo,diimo kale iyo nacayb loo qabo Muslimiinta.
Meeshaan maanta Masjidka ah ayaa markii hore ahaan jirtay meel Kaniisad ah oo Illaah qayrkii lagu caabudo, waa Illaah mahdiis maanta waa Masjid furan dhamaan xilliyada salaadaha dad badana ay ku tukadaan, waxaana lagu tiriyaa Masaajidaha ka jira waddanka Sweden kuwa ugu Jameeco badan.
Howlaha Masjidka ayaa u socda sidii loogu talagalay marka laga reebo weeraradaan cadowtinimada iyo ladagaalanka Guryaha Illaahay ee inagu wadaan dad iyagu wax magarato ah.
Muslimiinta degan magaallada waxay wallaalahood ka codsanayaan in ay kala qayb qaataan badbaadinta Masjidka waxayna u baahan yihiin in laga caawiyo kharashaadka:
-Si loo yareeyo dhibaatooyinka loo gaysanayo Masjidka waa in daaqadaha iyo albaabadaha lagu xiraa biro shabaq ah.
_Kharashaadka ku baxa Masjidka Korontada,biyaha, nadaafada,iwm.
FG: Wallaal waxaad Masjidka ku darsan kartaa sadaqo bil walba ah haddii ay noqon lahayd 50,100,150,200kr inta aad awoodid adida oo soo dhigaya AC:-825784234336701. Waxaad kaga xiri kartaa adiga oo jooga gurigaaga ee Videogaan.
Masjidku wuu wanaagsan yahay in la dhiso oo meel illaahayq eyrkii lagu caabudo in loo bedelo waa wax fiican, laakiin anigu waxaanba aaminsanaa in kaniisadooda lood aayo oo meel nadiif ah laga gato boos si la iskaga ilaaliyo dhacdoyinkaan soo nqonoqday. Laakiin waa wax fiican.
Kan FM LA BAXAY ILAAHAY MAANKA IYO WAX GARASHADABA KAA QAAD MAAN KU DHAHAA, WAAR MASJIDKA ILAAHAY AYAA SUURTO GALIYAY IN KINISAD BOOSKA KALA WAREEGO EE WAXA KALIYA EE LAGU WAYDIIYAA WAA WAX MAKULA BAXDAY ILAAHY DARTIIS HAA AMA MAYA LAAKIIN WAXAN AAD KU HADASHAY WAA DANBI EE ILAAHAY U TOOBAD CELI REER MIYI WAX MA GARATO AH AYAAD TAHAYE WAXAAD KU HADLAYSANA ISKA BAANDHEE INTAANAD BULSHADA LA HOR IMAAN BAYTKA ILAAHAYNA WAXBA HAKAGA SOO HOR JEESAN.
waar hadalka iska daaya ee masjidka caawiya waa ceebe
mansh allah waa ay fiicantay guriga alle SWC in wax lagiu darsadaav lakiin telefon maxa logu qori wayay lagla xidhiidho
C/caziiz Baliile says:
Asc wallaal Sihaam waxaad raaci kartaa dariiqa aan videoga kuugu tilmaanay haddii aad rabtid telefoonka waa 0762241515 Illaah ajar hakaa siiyo Asc
ilaahow naga qabo gaaladan beytkaaga soo weeraraysa aamiin yaa rabi